Mpanamboatra & Bag ny kosmetika - trano famokarana goavam-be any Sina
Ny kitapo volom-borona dia vita amin'ny fitaovana vita amin'ny PU matte izay avo lenta, izay mahafinaritra ny mikasika azy ary manana ny vokatr'ireo tsy fahita anaty rano ary mitafy ny fanoherana. Bika boribory, loko mifanohitra mafy, maro loko, makiazy isan'andro, lokanga, vokatra fikarakarana hoditra ary borosy na zavatra kely hafa ilaina rehefa mandeha. Mety amin'ny fametrahana kosmetika sy entana fitehirizana.
Ny famolavolana manokana manokana, mampiasa fitaovana PU avo lenta sy tsara tarehy, ny fisafidianana anatiny amin'ny savonina tsara sy malefaka, endriny feno hasina. Misy compartement marobe ao anatiny, izay mety amin'ny fitehirizana peratra, ny kavina, ny molotra, ny fehin-tanana, ny famantaranandro, sns, ahafahanao mamolavola sy mitahiry entana.
Ny kitapo fitehirizam-kitapom-batsy vaovao kitapo marika fonosana kitapo fanamboarana boaty mivantana varotra
Ny mpikarakara Multifunctional, boaty fitahirizan-kitapom-bahoakan'olom-bahoakan'olom-pifandraisana mitentina maro be dia vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba sy kalitao tsara indrindra amin'ny tontolo iainana, izay sombin-javatra-porofon'ny famoretana, famotehana, ranomaso ary mora madio. Mety amin'ny fitsangatsanganana, kitapo ivelany, fitsangantsanganana, fialantsasatra fialan-tsasatra, mandeha am-pisakafoanana na ranomasina, tora-pasika, gym.
New Nylon Dumpling kitapo mitondra ny rano kitapo Toiletry
Kalitao avo lenta: Ny kitapo ilaina amin'ny lozisialy dia vita amin'ny nilona avo lenta, tsy azo tanterahina ary mateza, mora diovina, azo ampiasaina indray, ho namana tontolo iainana, ny serivisy ela velona, ​​fitehirizana ny kosmetika tonga lafatra, no soloina kitapo plastika.
Kitapo kosmetika azo entina kitapo fitehirizana kitapo polka dot kitapo tarehy
Ny kitapo fanatsarana tarehy dia mety tsy ho kitapo fandroana fotsiny, fa kitapo kosmetika, kitapo fitahirizana, sns. Kitapo fitsangatsanganana miaraka amina fampiasana be dia be. Vita amina akora polyester momba ny kalitao avo lenta, famahanana hamandoana, tsy fahampian-drano, dia afaka miaro tsara ny entanao, ary tena mora ny diovina.